အချိန်ရဲ့ဒဿန (၂) | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← အချိန်ရဲ့ ဒဿန (၁)
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာတည်ဆောက်ပါ .. .. →
Posted on February 8, 2011 by chitnge
ဒီနေရာမှာ ဒဿနအကြောင်း အနည်းငယ် ပြောချင်တယ်။
ဒဿနမှာ အထူးသဖြင့် သိပ္ပံဒဿနမှာ ပေါ့လေ .. .. နေရာဆိုတာ (A Priori) ပါ .. .. တွေ့ကြုံရှေ့ ပေါ့။ ဆိုလိုတာက နေရာမရှိတဲ့ အရာဝတ္ထု ဆိုတာ မရှိဘူး .. .. အရာဝတ္ထု မရှိတဲ့ နေရာပဲရှိတယ်။ ဒီတော့ နေရာဆိုတာ တွေ့ကြုံရှေ့ပေါ့။ နေနဲ့ ကမ္ဘာ နေရာတွေ ယူပြီးတဲ့အခါမှာ အချိန်ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့။
ဒီတော့ နေရာကို ချေနိုင်ရင် အချိန်ကိုလည်း ချေနိုင်ရပေလိမ့်မယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ နေရာနဲ့ အချိန်ဟာ သချာင်္နည်းအားဖြင့် အတူတူပါပဲ။ နေ၀င်ရီတယောအချိန် (သို့မဟုတ်) တောင်စွယ် နေကွယ်တဲ့အချိန် စသည်ဖြင့်ပေါ့ .. .. နေထန်းတစ်ဖျား ဆိုတာနဲ့ မွန်းတည့်တာနဲ့ စသည်ဖြင့် ပေါ့ .. .. ဒီတော့ နေရာနဲ့အချိန်ဟာ သချာင်္နည်းအားဖြင့် အတူတူပါပဲ။ နေရာကို ချေလိုက်တဲ့ အခါကျတော့ နေရာကျေသွားရင် အချိန်လည်း ကျေသွားတာပေါ့။ ဒီအခါမှာ အချိန်က လွတ်မြောက်သွားတာပါပဲ။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အချိန်က လွတ်မြောက်တယ် ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သိပ္ပံမှာတော့ အချိန်က မလွတ် မြောက်နိုင်ပါဘူး။ Black Hole ထဲမှာပဲ အချိန်က လွတ်မြောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အသိမှ မရှိတော့တာ .. .. ဒီတော့ Black Hole ထဲမှာ ကျသွားတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာမှမသိတော့တဲ့ အတွက် တစ်စစီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ သူက အောင်မြင်တာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ Black Hole ရဲ့ ၀ါးမျို ခြင်းခံရတာ။
နိဗ္ဗာန်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာအရ စံဝင်တဲ့အခါ အချိန်က လွတ်သွားပြီးတဲ့နောက် ဖိုလ်ဉာဏ်ဟာ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ ချမ်းသာမှုကိုသိတော့ ဒါ အောင်မြင်တယ် ခေါ်တာပဲ .. .. ဒါ့ကြောင့် အသိပညာအရာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက အောင်မြင်တယ် .. .. သိပ္ပံကတော့ သွားနေတုန်း လာနေတုန်းလောက်ပဲ .. .. သို့သော် လောကီမှာ သတင်းပေးနိုင်တော့ လောကီမှာတော့ သိပ္ပံက ရေပန်းစားတာပေါ့။ အဆင့်မြင့်တဲ့ လောကုတ္တရာကျတော့ သိပ္ပံက မလိုက်နိုင်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ အောင်မြင်ခြင်း ပန်းတိုင်ကို လှမ်းကိုင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ အမှန်အကန်ပါပဲ .. .. ပဋိပတ္တိရှုဒေါင့်မှ သုံးသပ်တဲ့ သိပ္ပံဒဿနမှာ မြတ်ဗုဒ္ဓအဆိုအဆုံးမ ကွတ်ကဲလိုက်တာပါပဲ .. .. ၀မ်းသာပါတယ် .. ..
Tags: BLACK HOLE, Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ
This entry was posted in Buddhism, Frontpage and tagged BLACK HOLE, Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ. Bookmark the permalink.